Fampandrosoana ny firenena : Zava-dehibe ny fisandratana ara-toe-tsaina -
AccueilRaharaham-pirenenaFampandrosoana ny firenena : Zava-dehibe ny fisandratana ara-toe-tsaina
11/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Lohahevitra isan’ny goavana ao anatin’ny politika sy ny fitantanana ny firenena ny fampandrosoana. Raha te ho tonga amin’izany tanjona izany, dia ilaina ary zava-dehibe , hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fisandratana ara-toe-tsaina. “Ny fisandratana 2030, dia tsy vitan’ny fampandrosoana ara-toe-karena fa kendrena ao anatin’izany ihany koa ny fanavaozana ny ara-toe-tsaina. Izay no tsy maintsy hiaingantsika”, hoy ny fanamafisan’ity filoham-panjakana ity. Nambarany fa tsy tokony hifampitsikera , fa kosa tokony hifanolo-tanana ary tokony hibanjina ny tombontsoan’ny firenena ny rehetra, eo amin’izay lafiny fampandrosoana izay. Mba hahatongavana amin’io fisandratana ara-toe-tsaina io dia nilaza ny filoha fa tokony himasoana aloha ny fananana toe-tsaina mijery ny lafiny tsara fa tsy hijery foana ny zavatra manahirana sy ny sakantsakana maro samihafa. Hiarahan’ny rehetra mahalala ihany koa fa tsy vita ao anatin’ny iray andro, ary tsy vitan’ olona tokana ny fanatanterahana ny fanandratana sy ny fampandrosoana ity Madagasikara ity, na dia efa betsaka aza ny ezaka vita sy mbola hatao eo amin’ny lafin’ny ara-tsosialy, ny toe-karena, ny fampianarana, ny fahasalamana .
“Mila fotoana izany zavatra izany ka omeo ny herinao rehetra mba hahafahana handrosoana amin’ny fampandrosoana ny firenena satria tafiditra ao anatin’ny kolontsain’ny fisandratana izany” hoy ihany ny voalazany. Hevitra isan’ny novoizin’ny filoham-pirenena hatramin’izay ihany koa ny hoe mahavita zavatra tsara lavitra mihoatra ny noeritreretina , ary tsy mila miandry ny any ivelany ny Malagasy raha miara-mikaroka vahaolana sy enti-manana ao anatin’ny filaminana sy ny fitoniana. Ankoatra izay voalaza moa, dia niresaka ihany koa ny filoha, omaly tetsy amin’ny BAIMI Ivato fa tsy maintsy amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no hanamafisana ny demokrasia eto amin’ny firenena. “Tsy maintsy hajaina ny fahafahan’ny maro an’isa ary na iza na iza dia tokony hanaja izany satria io no endriky ny fampandrosoana ny firenena”, hoy ny fanamarihany. Nanentana ny teo anivon’ny antenimieram-pirenena moa izy mba hanamafy sy hanohy izany demokrasia izany, ho fanamafisana ny firaisam-pirenena.
Notanterahina io omaly io ny fanokanana ny toeram-pitsaboana eny amin’ny toby miaramila BAIMI Ivato (Base Aérienne et Installation Militaire d’Ivato) . Fotodrafitrasa izay nasiam-panavaozana sy nohatsaraina ary narahina fampitaovana maro ho tombontsoan’ny miaramila sy ny vady aman-janany ary ny mponina eny amin’ny manodidina, izay mitotaly eo amin’ny 2000 isa eo. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany lanonana izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no sady filoha faran-tampon’ny foloalindahy izay nankasitraka feno ny ezaka vitan’ireo miaramila hatramin’izay , ary mbola nankahery azy ireo hatrany hanohy ny asa fampandrosoana amin’ny alalan’ny fampandriana fahalemana ny tany sy ny fanjakana. Nanambara kosa ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rasolofoniriana Béni Xavier fa zava-dehibe ny fahasalaman’ny mpiray tanindrazana, satria dia izany no voalohan-karena raha te hampandroso ny firenena.
Fikambanana Av7 : Gadrao Ravalomanana Marc
Nanoloana ny tsangambato misy ny fahatsiarovana ireo namany izay voatifitra nandritra ny febroary 2009 no naneho ny alahelony sy ny fahatezerany ireo mpikambana anivon’ny Av7 izay notarihin’ ny filohany Bonat Jean Pierre « Tanteraho ny ...Tohiny